War Farxadleh Kenya oo lagu gacan saydhay Dalabkeedi iyo Dacwada ay ku rabtay Bada Soomaaliyeed ee Maxkamada ICJ. – Xeernews24
War Farxadleh Kenya oo lagu gacan saydhay Dalabkeedi iyo Dacwada ay ku rabtay Bada Soomaaliyeed ee Maxkamada ICJ.
Ayada oo la jirsatay Soomaaliya, ayaa Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda waxay diiday doodii Kenya ee ahayd in heshiiska u dhaxeeya labada dal uu ka dhigan yahay in muranka u dhaxeeya ay ku xaliyaan meel ka baxsan maxkamadda.
Xukunkan ayaa waxa uu macnihiisu yahay in kiiska soohidna badda ee ay maxkamadda geysay Soomaaliya kana dhanka ah Kenya uu sii socon karo, taasi oo ah hanaan sanado badan qaadan kara.
Dhul badeedka muranka uu ka taagan yahay ayaa la rumeysan yahay inuu hodan ku yahay shidaalka iyo saliidda.
Soomaaliya aya horay ugu gacan saydhay soo jeedintii Kenya ee ahayd in heshiiska Is-afgaradka uu yahay mid suurtagelin karta inay labada dal ku heshiiyaan xadeynta badda.
Kenya waxay ku cel-celisay in ujeedada heshiiskaasi uu ahaa in labada dal ay wadaxaajood ka yeeshaan muranka, oo aan loo baahneyn maxkamada ICJ.
Laakiin Maxkamada ayaa shaacisay iney qaadeyso dacwadan ayna aqbashay dalabkii Soomaaliya ee ahaa in go’aan caalami ah lagu xaliyo murankaas
Waxay sheegeen in hadii la raaco qaabka ay Kenya rabto ay qaadan karto ku dhawaad 20 sano, labada dalna ay dani ugu jirto in si dhakhse leh loo soo afjaro murankan, sidaa darteed ay maxkamadu go’aanka gaadheyso.
Labada dalba waxay sheeganayaan lahaanshaha dhul badeed baladhkiisu uu gaadhayo 142 kun oo km oo labo jibbaaran, waxayna sidaasi darteed Soomaaliya ka dalbatay maxkamadda inay xadeyso xaduudda badda ee labada dal si waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/war-farxadleh.jpg 159 240 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-02 18:02:042017-02-02 18:02:04War Farxadleh Kenya oo lagu gacan saydhay Dalabkeedi iyo Dacwada ay ku rabtay Bada Soomaaliyeed ee Maxkamada ICJ.
Maxaa ka taqaan taariikhda 8-da Musharax ee maanta khudbadaha jeedin doona Gudoomiya Xisbiga Wadani Ee Gobolka Selel Oo Naqdiyay Talaabooyin Sixir Bararka...